May 13, 2021 - Channel Lover
May 13, 2021 by Channel Lover
ဦးဇော်ဇော်ကို ဧရာဝတီဘဏ် ဥက္ကဌ ရာထူးမှ ဖြုတ်ချ…. ဧရာဝတီဘဏ် ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော် နေရာတွင် ဒေါ်ခင်စောဦးအား ခန့်အပ်လိုက်သည်ဟုသိရ ဒီသတင်းမဟုတ်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းနေတာဆုတောင်း မပြည့်ခဲ့ဘူး မနေ့ထဲက သတင်းမှာ ကြေငြာသွားတယ်လို့ သိရပါတယ် ဒါပေမဲ့လဲ မသေချာမှာဆိုးလို့ မတင်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူး အခုတော့ တကယ်သေချာ သွားပါပြီ ဦးဇော်ဇော်ကို ဖမ်းထားတယ်လို့လဲ သိရပါတယ် ကိုယ်ကျိုးကို မကြည့်ပဲ မြန်မာပြည်သူတွေ အကျိုးအတွက် အရာရာ စွမ်းစွမ်း တမံ အဆုံးထိရှေ့ဆုံးကနေ ကာကွယ် စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ ဦးဇော်ဇော်ဘေးအန္တာရာယ်ကင်းရှင်းပါစေ မအလက သူများပစ္စည်းကိုယ့် ပစ္စည်းလုပ်ပြီး မြန်မာတပြည်လုံးကို အပိုင်သိမ်းပြီး မဟုတ်ကဟုတ်က ပုဒ်မတွေတပ်ပြီး ဦးဇော်ဇော်ကိုလဲ အရှေ့က ဦးမောင်ဝိတ်တို့ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့လိုပဲ လုပ်ဇာတ်တွေ နဲ့ နုတ်ထွက်ခိုင်းလိမ့်မယ် (Edit ဒီကြေငြာချက်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က … Read more
တလုပ်ကျေးရွာကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ ထို ၂ ရက် မြင်းခြံမြို့ အနီး တလုပ်မြို့ကျေးရွာ မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး ဝင်စီးခံရတဲ့ မေလ ၁၁ ရက်နဲ့ မေလ ၁၂ ရက် ၂ ရက်တာ အခြေအနေ အသေးစိတ်ကို ဒေသခံ တဦးအား မေးမြန်းပြီး တင်က်ပေးထားပါတယ်။ မေလ ၁၁ ရက်နေ့ အခြေအနေ… နေ့ခင်း ၁ နာရီခွဲလောက်မှာ တလုပ်ရွာဘက်ကို စစ်ကား ၁၀ စီးအပြင် အိမ်စီးကားတွေနဲ့ပါ ‌‌ရောက်ရှိလာ။ လက်နက် အပြည့်အစုံ တပ်ထားတဲ့ အင်အား ၁၂၀ ‌ကျော်လောက် ရွာအပြင်မှာ နေရာယူထား။ ပြီးတော့ ၁၀ မိနစ်လောက် အကြာမှာ သေနတ်တွေနဲ့ စတင် ပစ်ခတ်။ သူတို့ဘက်က ရွာတံတားကို ချိုးဖို့လုပ်တယ် … Read more
ပရိတ်သတ်ကြီး ရေ…ဘယ်တော့ မှလဲကျ မသွားဘဲ ပစ်လိုက်တိုင်းထောင်ေ နတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ကစားစရာ အရုပ်လေး ပစ်တိုင်းထော င်ရဲ့အနှစ်သာ ရကို ဒီနှစ်ရဲ့ Miss Universe စင်မြင့်ထ က်မှာ မြန်မာ ကိုယ်စာြး ပု အလှမယ် သူဇာဝင့်လွင်က ဖော်ပြတော့မှာပါ။ ရည်ရွယ်ချက်ေ ကာင်းတွေ ရှိတဲ့ဒီအရုပ်လေးကို မြန်မာတင်မက ကမ္ဘာကပါ အသိအမှတ်ပြုပြီး စိတ်ဝင်စားမှု ခံရတော့မှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီဝတ်စုံလေးကို National Costume အဖြစ်နဲ့ ပွဲထုတ် ဖို့စီစဉ်ထားပေမယ့် လက်ရှိအချိန်ထိ Candy လက်ထဲ မရောက်လာသေးပါဘူး။ ဒီအကြောင်းကို လည်း ” ၅.၅. ၂၁ – DHL Agent မှ ရန်ကုန်တွင်ပစ္စည်းလာယူ ၆.၅. ၂၁ – … Read more
မိန်းမ ရပြီးသွားရင် လုပ်လို့ မရတော့တဲ့ အရာ (၉)ခု။ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဟာ ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့ အချိုး အကွေ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ အိမ်ထောင် ကျပြီးတဲ့အခါ နေထိုင်သွားလာမှု ပုံစံတွေ ပြောင်းလဲသွားကြရပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်း ဘဝတုန်းက နေခဲ့သလိုမျိုး အိမ်ထောင် သည် ဘဝမှာ နေဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့အခါ အမျိုးသားတွေရော အမျိုးသမီးတွေပါ ပြောင်းလဲကြ ရပါတယ်။ အမျိုးသားတွေအတွက် အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့အခါ လုပ်လို့မရတော့တဲ့ အရာ (၉) ခု ရှိပါတယ်။ ၁။ တစ်ညလုံးသောက်ပြီး အလွန်အကျွံမူးခြင်း – အရင်ကတော့ တစ်ညလုံး အရက်သောက်ပြီး အပြင်မှာ နေလို့ရပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့အခါ ဒါမျိုး လုပ်ရင်တော့ ပြဿနာ ကျိန်းသေပေါက် တက်မှာပါ။ … Read more
သငျ့ရဲ့အိမျမှာ ခွငျ၊ ယငျ၊ကွမျးပိုး ၊ပိုးဟတျ၊ဖွုတျကောငျတှနှေငျ့ အခွားမလိုလားအပျတဲ့ အငျးဆကျတှမြေားနလေို့ စိတျပကျြနရေပွီလား ?သငျ့ရဲ့အိမျမှာ ဒါမှမဟုတျသငျ့ရဲ့အခနျးမှာခွငျတှေ ယငျတှေ ကွမျးပိုးတှေ ပိုးဟတျတှတျေကောငျ တှနှေငျ့ အခွားမလိုလားအပျတဲ့ အငျးဆကျတှမြေားနလေို့ စိတျပကျြနရေပွီလား။ပရုပျလုံး ၂ လုံး ၃ လုံးလောကျကို တဈရှုးစက်ကူနှငျ့ပတျပွီး မီးရှို့လိုကျပါ အမဲရောငျ မီးခိုးတှနှေငျ့အတူ တဈခနျးလုံး ပရုပျနံ့တှေ ထှကျလာပါလိမျ့မယျ။ အခနျးတံခါးတှကေို ပိတျထားလိုကျပါ။ လောငျကြှမျးပွီးခြိနျမှ တံခါးတှကေိုဖှငျ့ပေးလိုကျပါ။ သူတို့အတှကျ အသကျမသပေဲ ထှကျပေါကျပေးခွငျးပါ။ခွငျဆေးခှေ ထှနျးခွငျးက သငျ့မှာ baby လေးတှအေတှကျ အန်တရယျရှိနိုငျသေး တယျ။ပရုပျလုံးလောငျကြှမျးခြိနျကတော့ ၁၀မိနဈမြှသာပါ။baby ရှိနလြှေငျအပွငျမှာ ခတ်ေတရှောငျနလေိုကျပေါ့။တဈနကေို့ ၃ ကွိမျ ဖွငျ့ ၃ ရကျ ရှို့မညျဆိုလြှငျ အားလုံး ပွလေညျသှားမှာပါ …သငျ့ရဲ့အဝတျအထညျတှမှောတောငျ ပ ရုပျနံ့ စှဲကနျြနရေဈခဲ့မှာပါ။ … Read more
အမခေျေါစရာမရှိဘဲ အနားမှာအမွဲ ရှိနပေေးတဲ့ ဖခငျဖွဈသူကိုကြေးဇူးတငျစကားဆိုလာတဲ့ နခွေညျငွိမျးခမျြး
ရယျစရာဟာသပွကျလုံးတှနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျ မှုတှကေို အခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ လူရှငျတျောငွိမျးခမျြး ကတော့ သဘငျလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှရေရှိထားသူ ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဟာသ လူရှငျတျောတဈယောကျဖွဈသလို ဇာတျကားတှေ လညျး မြားစှာရိုကျကူးထားတဲ့ ငွိမျးခမျြးကတော့ ပရဟိတအလုပျ တှကေိုလညျး လုပျဆောငျနတော တှရေ့ပါတယျ။ ငွိမျးခမျြးရဲ့သမီးခြောဖွဈတဲ့ နခွေညျငွိမျးခမျြးကတော့ လူမှနျးသိ တတျစအရှယျကတညျးက အမခေျေါစရာမရှိဘဲ အနားမှာအ မွဲရှိနပေေးနတေဲ့ ဖခငျဖွဈသူကို ကြေးဇူးတငျစကားဆိုလာပါ တယျ။ အမခေျေါစရာမရှိပမေယျ့ အခုခြိနျထိ အဖခေျေါခှငျ့ရတာကိုက ဘာနဲ့မှမလဲနိုငျတဲ့အကွောငျးတှကေို အမမြေားနမှေ့ာ သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာကနေ ရေးသားပွောပွ ထားတာ ဖွဈပါတယျ။ “အမမြေားနဆေို့တာ သိလိုကျရတဲ့ အခြိနျမှာနောကျကမြှ သိ လိုကျရလို့ စိတျမကောငျးဖွဈသှားတယျ မမေေ…လူမှနျးသိထဲက မမေခေျေါစရာမရှိပမေယျ့ ဖဖေကေ အမွဲအနားမှာရှိနေ ပေးခဲ့လို့ ကြေးဇူးပါဖဖေေ… မမေလေို့ချေါ စရာမရှိပမေယျ့ … Read more
၁၅ ရက်နေ့ အင်တာနက်လိုင်းများ ပိတ်မည်ဆိုသည့်သတင်း
၁၅ ရကျနေ့ အငျတာနကျ လိုငျးမြား အကုနျပိတျ မညျဆိုသညျ့သတငျးအပျေါOperator တှပွေောတဲ့စကား အားလုံးသိခငျြနကေတြဲ့ မလေ ၁၅ရကျ နေ့ အငျတာနကျ Wifi fiber လိုငျး မြား ပွနျ ပိတျ မပိတျ ဆိုတာကိုအားလုံး စိတျရှငျး သှားအောငျစတေနာ အပွညျ့နဲ့ တငျပေးလိုကျပါတယျ “မလေ ၁၅ ရကျနေ့ အငျတာနကျ လိုငျးမြား အကုနျပိတျ မညျဆိုသညျ့သတငျးတတျ လာတာအားလုံး သိပွီးတှပွေီ့းပွီလို့ ထငျပါတယျ” အှနျလိုငျးမှာပြံ့နတေဲ့ မလေ ၁၅ ရကျနအေ့ငျတာနကျလိုငျးမြား အကုနျပိတျမညျဆိုသညျ့သတငျးမှာ အတညျ မပွုနိုငျသညျ့ ကောလ ဟာလ သတငျးတဈခုသာသာ ဖွဈပါတယျ။အဆိုပါ သတငျးနဲ့ ပတျ သကျ ပွီး အတညျ ပွု နိုငျ သညျ့ မညျ သညျ့ … Read more
ATM ကတ်ထဲကငွေထုတ်ဖို့ အဆင်ပြေတဲ့ နည်းလမ်း (မျှဝေပေးကြပါ)
တချို့ဆို ATM ကတ်ထဲကငွေထုတ်ဖို့ကိုမနက်၆နာရီလောက်ထဲကထပြီးသွားတန်းစီရတယ်…. လူတွေအရမ်းများတော့တနေကုန်နီးပါးတန်းစီ…. နေ့ခင်း၃လေးနာရီလောက်မှတရက်စာအတွက်ထုတ်ပေးတဲ့၃သိန်းလေးပဲရတာ ဒါတောင်တခါတလေကိုယ့်အလှည့်ရောက်လို့ATM စက်ရှေ့ရောက်ပြီဆိုမှပိုက်ဆံကုန်သွားပြီဆိုပင်ပန်းလွန်းခဲ့သမျှသေပါလေရောပဲ…. အဲ့လိုလုပ်မဲ့အစားAYA Pay အကောင့်တခုဖွင့်လိုက်ပြီးAYA Pay Agent ( သို့) Max ဆီဆိုင်ကနေပဲငွေထုတ်ခFees နဲနဲလောက်ပေးပြီးထုတ်လိုက်ကြပါ…… တနေကုန်အိပ်ရေးပျက်အပင်ပန်းခံတန်းစီနေမဲ့အစား ပိုက်ဆံ၃သိန်းကိုထုတ်ခ2500 လောက်ပေးလိုက်ရတာကပဲပိုအဆင်ပြေကြမှာပါ….( ခုချိန်မှာတော့agent တွေလဲငွေထုတ်ပေးဖို့အဆင်မပြေလောက်တော့ ကျွန်တော်က တော့Max ဆီဆိုင်ကနေပဲ သွားထုတ်ခဲ့တယ်…) တနေ့ကို၃သိန်းထုတ်ပေးပါတယ်…… ( AYA Pay Acc ကLevel2ဖြစ်ရပါမယ်) 1…. အရင်ဆုံးPlay store ကနေပြီးAYA Pay App ကိုdownload ဆွဲပါ…. 2…. ပြီးရင်Acc ဖွင့်လိုက်ပါ..Acc ဖွင့်တာလွယ်လွယ်လေးပါ.. Ph no ၁ခုပဲလိုတာပါ…( အကောင့်နာမည်ကိုမှတ်ပုံတင်ထဲကနာမည်အတိုင်းထားပါဗျ… acc name Eng လိုရေးပါ) ဖုန်းထဲကိုပြန်ချပေးတဲ့Otp … Read more
အဆိုတော်မေသက်ထားဆွေ ရာသက်ပန် သာသနာ့ဘောင်သို့ ၀င်ရောက်
အဆိုတော်မေသက်ထားဆွေ ရာသက်ပန် သာသနာ့ဘောင်သို့ ၀င်ရောက် ဓမ္မမိတ်ဆွေနိုင်ငံကျော်အဆိုတော် မေသက်ထားဆွေ မြင့်မြတ်သည့် သာသနာ့နွယ်ဝင်သီလရှင် အဖြစ်သို့ ရာသက်ပန်အပြီးတိုင် ဝင်ရောက်သွားသည့် စွန့်လွှတ်ပြတ်သားသည့် ကုသိုလ်စိတ်အား သူမ၏ချစ်သောပရိတ်သတ်များနဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ၊ ဗောဓိဟိတကာရီ သာသနာပြုအဖွဲ့ ဝင်များ အံ့ဩဝမ်းမြောက်သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေ။ (ဆရာလေး၏စွန့်လွှတ်ပြတ်သားသည့်ကုသိုလ်စိတ် အား ထပ်ဆင့်မျှဝေကုသိုလ်ယူကြပါ) ဗောဓိရိပ်ငြိမ်တောရဆရာတော်ကြီး၏ မေတ္တာရိပ်ဝယ် အဓိဌာန်တစ်ခု(၉)ရက်ပြုကျင့်၍ ပြည့်ဝခဲ့ပြီး ခိုင်မာပြတ်သား၍ လောကီကျော်ကြားဂုဏ်ပကာသနများစွာကိုစွန့်လွတ်စိတ်အပြည့်ဖြင့်စွန့်လွှတ်ပြီး လူ့ဘဝမှ မြင့်မြတ်သည့်သီလရှင်ဘဝကိုရာသက်ပန် ဝတ်ရန် သန္နိဌာန်ချ၍ တရားဘာဝနာအားထုတ်၍ကြိုးပမ်းမှုအား မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အံ့ဩမိပါတယ်။ 🙏ဗောဓိရိပ်ငြိမ်တောရဆရာတော်ကြီး၏အဆုံးအမ🙏 လှမ်းတော့နန်းဆီအိုယောဂီ တစ်နေဝင် တစ်နေထွက်ရယ်ဖြင့် မသေခင် အကြွေဆက်ပါလို့ သေရက်ကိုတဲ့ နီးခဲ့ပါပြီ။ မှောင်တဏှာ ဖော်အများတွေနဲ့ ရှောင်မခွာ သေသွားရင်ဖြင့် နောင်အခါလားလိမ့် အပါယ်ဆီ။ နှိပ်စက်ခံ ရုပ်နာမ်တရားကိုလည် ချိတ်ဆက်ဉာဏ် ဖြစ်ပျက်ပွားလျှင်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်တံခါး ပွင့်တော့မည်။ ဖြစ်ပျက်မြင်လမ်း … Read more
သံလိုကျလူသားစှမျးအားရှငျဖွဈခငျြ၍ သံလိုကျ၅၄လုံးကို မြိုခခြဲ့သော ကောငျလေး
ကငျးမ ရှာလုံးကြှတျ မီးရှို့မှုနဲ့ ပတျသကျပွီး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောလာတဲ့ မငျးမျောကှနျး…
စှဲမကျဖှယျကောငျးသော 6-packsကွှကျသားအပွညျ့နှငျ့ ဝယျသူမြားအား ဆှဲဆောငျနသေော ဖရဲသီးသညျ နာမညျကွီးနေ
ဆိုငျကယျတဈစီးလုံးကို ခေါငျးပျေါမှာ ရှကျပွီး ကုနျတကျကားပျေါသို့ တငျပေးရသော အလုပျသမားတဈယောကျဧ။ျ ဘဝ
သငျ့အသားအရကေို ခကျြခငျြးဖွူဝငျးသှားစမေယျ့ ရှားစောငျးလကျပပျအသုံးပွုနညျး(၄)မြိုး …